U-Lucinda Riley: intsiba esemva kweMfihlo ye-Orchid | Uncwadi lwangoku
Iincwadi zikaLucinda Riley
U-Lucinda Riley wayengumbhali obalulekileyo wase-Bhritane owayegqama kwicandelo lezoncwadi ngeempumelelo zakhe. Oko kwapapashwa Imfihlelo ye-orchid, Umbhali woyise abafundi abaninzi kwihlabathi liphela. Phantse iminyaka engama-30 yembali, imisebenzi kaRiley iye yapapashwa kumazwe aliqela kwaye iikopi ezingaphezu kwezigidi ezingama-30 zithengisiwe.
Enye yeempumelelo zakhe ezinkulu zeza ngo-2014, ngokusungulwa kolu ngcelele ibhiliyoni: Oodade abasixhenxe. Inoveli nganye kolu luhlu ikonwabele ukwamkelwa okugqwesileyo ngabalandeli bayo. Ngo-2021 umbhali waqala: Usisi olahlekileyo, isixa sesixhenxe sengqokelela. Olu papasho lokugqibela luthathe indawo yokuqala yokuthengisa kwihlabathi iiveki.
1 Iincwadi ezigqwesileyo ngumbhali
1.1 Imfihlelo ye-Orchid (2010)
1.2 Iingcambu zeengelosi (2014)
1.3 Oodade abasixhenxe: Ibali likaMaia (2016)
1.4 Igumbi lebhabhathane (2019)
2 ULucinda Riley Biography
2.2 Imisebenzi yokuqala yoncwadi
2.3 Iinoveli eziyimpumelelo
2.5 Iincwadi zikaLucinda Riley
Imfihlelo yeorchid (2010)
UJulia Forrester —Umdlali wepiyano odumileyo— hamba ngesiganeko esibuhlungu oko kususe intsingiselo yobomi bakhe. Intliziyo ibuhlungu, uyaqhubeka Ufuna intuthuzelo ecaleni kodadewabo Omkhulu, uAlice. Kudlula iinyanga ezimbalwa, kwaye Bobabini bahamba uhambo kwindlu yobumnandi yaseWharton Park (apho bachitha ixesha lobuntwana kunye nelokufikisa), emva kokufumanisa ukuba iyathengiswa.
Iinkumbulo zobuntwana bakhe zithi qatha engqondweni, xa wabelana ngolonwabo kwigreenhouse kunye notatomkhulu wakhe ongasekhoyo uBill - igadi yale ndlu inkulu. Ukufika kwakhe, udibana nomhlobo wakhe kwasebusheni bakhe, uKit Crawford, indlalifa yokugqibela yolo sapho. Ugqibe kwelokuba athengise ipropathi eyonakeleyo engafumani sondlo kwiminyaka.
Ukufezekisa injongo yakhe, umfana uphethe ifandesi kwindlu enkulu; UJulia uzimasa lo msitho. Apho, ufumana i-canvas kunye ne-orchid engaqhelekanga eThailand, njengeentyatyambo ezingaqhelekanga ezazikhuliswa ngutatomkhulu wakhe. Kitkananjalo Umnika idayari, acinga ukuba inokuba yeyomthetho osayilwayo ongasekhoyo. Enomdla, uJulia uya kwindlu kaninakhulu uElsie, engazi ukuba olu tyelelo luza kutyhila iimfihlelo ezinzulu zakudala.
Iingcambu zengelosi (2014)
UGreta khange ahambele ikhaya lakhe lakudala, iMarchmont Hall, kwilali yaseMonmouthshire ngaphezulu kweminyaka engamashumi amathathu. Umhlobo wakhe othembekileyo, uDavid, ambiza ngothando ngokuthi nguTaffy, ummemile ukuba abuyele apho aye kuchitha iKrisimesi kunye, isipho asamkelayo ngaphandle kokuthandabuza. UGreta akakhumbuli kwanto, nokuba yindawo leyo, okanye ixesha awayehlala kulo, ngenxa yengozi enkulu apho aphulukene nenkumbulo yakhe.
Nje ukuba ujikelezwe yindawo-leyo, nangona ibanda, ipholile- uthatha uhambo kwaye fumanisa Phakathi kwamasebe amaninzi ingcwaba. Ilitye lengcwaba libonisa ukuba umntwana ungcwatyelwe apho. Ukususela ngelo xesha ukuya phambili, engqondweni kaGreta iinkumbulo ziqala ukufika ezilahlekileyo emva kwesehlo awasokola kuso; UTaffy umnceda ukuba aziqonde.
Yiyo ke le nto impikiswano iqhubeka, phakathi kwamaxesha amabini: i-XNUMXs (edlulileyo), kunye nee-XNUMXs (ingxelo yangoku). Ukusuka kwimemori ukuya kwimemori IGreta iyakha kwakhona imbono awayenayo Umhlaba wakhe, kubandakanya ze intombi yakhe uCheska, umlinganiswa omnyama nothatha isigqibo sebali, kwaye izenzo zabo zifanelekile kwingqondo ephazamisekileyo ...
Oodade abasixhenxe: Ibali likaMaia (2016)
UMaia D'Aplièse ubuyela kunye noodadewabo abancinci kwindawo apho bakhuliswa khona. Isizathu: la ebuhlungu ukusweleka kweTyuwa, owathi, kudala wabamkela, wazinikezela ukuba babanyamekele. Silindele ukufa kwakhe, umlinganiswa oyindumasi washiya nganye yeentombi zakhe uxwebhu olunemikhondo eya kuthi ibenze bazi ukuba bavela phi.
maia Emva kokuba uhlalutye ulwazi olufumene kwileta yakho— uya eRio de Janeiro. Ukufika kwindawo ebonisiweyo, umlinganiswa ophambili ufumana indlu endala itshatyalaliswe kwaphela. Imibuzo yakhe imkhokele ukufumanisa ibali elibuyela emva kwii-20s, xa kwakusakhiwa uKristu uMhlawuleli.
Ngelo xesha intambo entsha ebalisayo iqala ebandakanya u-Izabela Bonifacio, ibhinqa eliselula elinomdla. Ubuza utata wakhe ukuba amyeke aye eParis ngaphambi kokuba atshate. Kanye kwisiXeko sokuKhanya, Umfazi ungqubeka kuLaurent Brouilly... kwaye oku kuvela ukudibana okubalulekileyo eziza kuphendula uninzi lwezinto ezingaziwayo zikaMaia.
Oodade abasixhenxe (i ...
Igumbi lebhabhathane (2019)
Kwindlu yeAdmiral, indlu enkulu emaphandleni esiNgesi iSuffolk, ubomi bayo bonke UPosy Montague. Sele esondele kwiminyaka yakhe yokuzalwa engamashumi asixhenxe, umfazi khumbula amaxesha amnandi ebuntwaneni bakho apho ku yena noyise babamba amabhabhathane ukubukhumbula ubuhle bazo emva koko ubakhulule. Ixhegwazana liyakhumbula amaxesha amnyama amakisha ebomini bakhe.
Posy kwafuneka ukuba abe ngumhlolokazi wokuqala, njalo kwafuneka akhulise abantwana bakhe ababini eyedwa: UNick y Sam. Imeko akuyo ngoku imkhokelele ekubeni athathe isigqibo uthengise indlu yosapho -Ngoku ngaphandle kokuthanda ipropathi, ngakumbi igadi entle anikezele kuyo ngaphezulu kweminyaka engama-25. Isizathu: Indlu ye-Admiral iyawohloka ngokukhawuleza, kwaye iMontague, phantse iminyaka engamashumi asixhenxe ubudala, ayinakukwazi ukuhlawula ukulungiswa.
Ukongeza koku kuchazwe ngasentla, umatriarch kuya kufuneka ajongane naye obunye ubunzima obungqongileyo. Umntwana oneengxaki zotywala, uthando oludala oluvela kwakhona ukuveza imfihlo, kunye nexesha elidlulileyo angalaziyo, efihliweyo ezindongeni zendlu.
Ibali liza kwaye lihamba phakathi kuka-1943 no-2006, kulo Imbali edlulileyo egcwele izigqibo ezingalunganga iyaboniswa ezinefuthe elikhulu ngoku kwaye ukuba luthando lokwenene kuphela olunokuxolela.
ULucinda Riley Biography
ULucinda Edmonds wazalwa ngolwesiHlanu kuFebruwari 16, 1968 eLisburn, eIreland. Uhlale iminyaka emithandathu kwilali yaseDrumbeg. Emva koko wafudukela eNgilani nosapho lwakhe, apho wadibanisa izifundo zakhe zokuqala kunye neeklasi zebhaleyi. Njengomntwana, umbhali wayenombono omkhulu, ngexesha lakhe lokuzithandela wayethanda ukufunda nokubhala amabali awathi emva koko wawabonisa esebenzisa iilokhwe zikanina.
Ukususela ebutsheni, uthando lukaLucinda lobugcisa bokwenza lwaqhubeka. Kwiminyaka eyi-14 waya eLondon, apho wabhalisa kwisikolo sokudanisa kunye nedrama. Emva kweminyaka emithathu yamalungiselelo, wafumana indima ephambili kolu thotho Ibali labaFuni beNdyebo, kwinethiwekhi kamabonakude BBC. Emva koko, wasebenza iminyaka esixhenxe ilandelelana kwinqanaba lobungcali kwi ye midlalo, umabonwakude kunye nomabonakude.
Imisebenzi yokuqala yoncwadi
Ngeminyaka eli-23 nasemva kokudinwa nefiva, uRiley kwafunyaniswa ukuba une-Epstein-Barr virus. Esi sifo samgcina ebhedini ixesha elide. Ngeli xesha, wabhala incwadi yakhe yokuqala, Abathandi kunye nabadlali (1992). Nangona wawungenampembelelo ibalulekileyo, umsebenzi usebenze njengenkuthazo. Ukusukela ngalo mzuzu ukuya phambili, umfazi waseIreland wadibanisa ubomi bentsapho yakhe kunye noncwadi, kwaye uqhubeke nokuvelisa ezinye iinoveli ezisibhozo.
Ngenxa yeengxaki zakhe nge-LMT (ukwenzakala okuphindaphindayo) kunye noxinzelelo, Ugqibe ekubeni athenge i-dictaphone ukuze angachithi ixesha elininzi ehleli phambi kwekhompyuter. Oku kwaququzelela kakhulu ukusebenza kwabo.
Kule minyaka ili-18 izayo, umbhali ugxile ekudaleni uhlobo lwenoveli olungeyorhwebokodwa into angathanda ukuzifundela yona. Kwimbali yakhe wongeze iinkcukacha zembali ezivumela ukuba iziqwenga zingene ngakumbi kubafundi.
Oku kuchazwe ngasentla kuyahambelana ngokupheleleyo ukuyazi loo nto kwa umbhali omnye: "Ngonaphakade Ndiye ndatsaleleka kwinto yakudala kwaye bendihlala ndifunda iinoveli zembali. Elona xesha ndilithandayo li-1920s / 30s kunye nababhali abahle njengoF. Scott Fitzgerald noEvelyn Waugh ”.
Kwakunje Ngo-2010 wapapasha ukuba yintoni eya kuba ngumsebenzi oza kumkhokelela kudumo lwamanye amazwe: Imfihlelo yeorchid. Eli bali libambe iindawo eziphezulu zokuthengisa ixesha elide. Ifomula yayithandwa kangangokuba imisebenzi emine elandelayo kaRiley nayo yaba yiyo athengisa.
En EtiMnga ka 2012, Ndagqiba kwelokuba ndiqale ngesaga yosapho ejikeleze abanye abafazi abancinci kunye notata wabo oyintsingiselo, awathi: Oodade abasixhenxe. Ukususela ekuqaleni, ukupapashwa kukhokelele kwimpumelelo epheleleyo. Yiyo loo nto ngo-2014 yaqala ukupapasha incwadi kolu ngcelele unyaka nonyaka, apho bekukho izavenge ezisixhenxe ukuza kuthi ga ngoku.
Bekulindelwe que en el 2022 iya kupapashwa I-Atlas: Ibali lePa Ityuwa, Njengomphelelisi weSaga. Nangona kunjalo, ukufa engalindelekanga Umbhali uthathe ithuba buhlungu kwizicwangciso. Nangona kunjalo, Unyana wakhe, uHarry Whittaker, Wachaza ukuba uya kuthobela kunye neminqweno kanina kwaye uya kujongana nokuthatha isavenge sesibhozo en intwasahlobo ka 2023.
Kule nkalo, UWhittaker wathi: “Umama undixelele iimfihlelo zoluhlu kwaye ndiza kusigcina isithembiso sam sokusabelana nabafundi bakhe abazimiseleyo.”. Lo mfana uya kuba ngumbhali-kunye womsebenzi.
ULucinda riley Usweleke ngoJuni 11, 2021, ndineminyaka engama-53 ubudala. Izalamane zakhe zabhengeza ukusweleka kwakhe ngengxelo, emva kokulwa iminyaka emine ngokuchasene nomhlaza owoyikekayo.
Intombazana eweni (2011)
Isibane emva kwefestile (2012)
Ezinzulwini zobusuku wavuka (2013)
Imfihlo ka-Helena (2016)
Ileta elityelweyo (2018)
yomlando Oodade abasixhenxe
Oodade abasixhenxe: Ibali likaMaia (2014)
Usisi Storm: Ibali lika-Ally (2015)
Udade oShadow: Ibali leNkwenkwezi (2016)
Usisi Pearl: Ibali likaCeCe (2017)
Udade inyanga: ibali likaTiggy (2018)
Udade ilanga: ibali lika-Electra (2019)
Udade olahlekileyo: Ibali likaMerope (2021)
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Iincwadi » Iincwadi zikaLucinda Riley
NguYesu Valero. Udliwanondlebe nombhali we-echo yezithunzi